Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2011 (8)
Q and A September 2011 (8)
၁။ ပိန်ဆေးအကြောင်း (ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး) သိချင်ပါသည်ရှင်။
၂။ I would like to know the menstruation period and
၃။ ထိပ်ခတ်နာလား၊ ထိပ်ကွက်နာလား၊
Figger 1000 (Nutri Master) ပိန်ဆေးအကြောင်း (ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး) သိချင်ပါသည်ရှင်။ အစာစားပြီး ၁ လုံး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်လို့ရသည် ညွန်းပါတယ်။ အသက် ၂၇ ကျော်၊ အရပ် ၅ ပေ ၂ လက်မမှာ ပေါင်ချိန် ၁၃၂ ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ ပေါင်ချိန် ၁၁ဝ လောက်ဖြစ်ချင်ပါသဖြင့် ဆေးကောင်းနည်းကောင်းများ ရှိလျှင် ညွန်ပြပေးစေချင်ပါသည်ရှင်။ ဆရာဝန်တယောက်ညွန်းသည်မှာ Orlistart ပိန်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းဆေး၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများလည်း သိချင်ပါသည်ရှင်။
Figger 1000 VLA and (Vitamin E) ကို ပိန်ဆေးဆိုပြီး ဆေးကုပ္မဏီ ကြော်ညာမှာ ဖတ်ရတယ်။ ဆေးကို Safflower ကနေ ထုတ်တာလို့ ပါတယ်။ ဓါတုနာမည်ကတော့ Conjugated linoleic acids (CLA) ဖြစ်တယ်။ ဒီအက်စစ်ဓါတ်ဟာ အမဲသား ကနေရတယ်။ သားပိုက်ကောင် အသားကလဲရတယ်။ Trans fatty acids ဖြစ်ပေမဲ့ လူကို အကျိုးပြုနိုင်ပုံရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အစတုံးက ကင်ဆာဆေး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အကောင်တွေကို စမ်းသပ်ရာကနေ သိလာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Belly firmness ဗိုက်ချပ်အောင် သုံးလာတယ်။ ဒိနောက်မှာ Weight management ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် သုံးလာတယ်။ အစွမ်းသတ္ကိက အသင့်အတင့် ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ 3.2g/day သောက်ရတယ်။ ဒါထက်ပိုလဲ မထူးဘူး။ အမှန်က အဆီကို သက်ရောက်စေတယ်။ အလေးချိန် သိပ်ကျဘို့တော့ကတော့ နဲနဲသာဖြစ်စေတယ်။ Obesity အဝလွန်နေတာကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ဘူး။ ဆီးချို ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ဆီးချိုကို သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုတာလဲ ရှိသေးပြန်တယ်။ သည်းခြေကျောက် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်။ ချုပ်ပြောရရင် ဒီဆေးကို ပိန်ဆေးအဖြစ်သုံးတာ ထိရောက်မှု အသင့်အတင့် ရှိနိုင်တယ်။ ဆီးချို ဖြစ်မလာအောင် စစ်နေသင့်တယ်။
Orlistat (Xenical) ဆေးက Tetrahydrolipstatin ပါတယ်။ ပိန်ဆေးအဖြစ်ရောင်းတယ်။ စားတဲ့အစာထဲက အဆီကို အူကနေ စုပ်ယူမှာကို တားဆီးပေးတယ်။ လူပိန်စေအောင် အသင့်အတင့်ကောင်းတယ်။ Lifestyle modifications လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းတာနဲ့
တွဲရတယ်။ ဥပမာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ။ ကြာမှ အစွမ်းပြတယ်။ တနှစ်နေရင် ၂-၃ ကီလို လျော့တယ်။ ဆေးဖြတ်ရင် အလေးချိန် ပြန်တက်နိုင်တယ်။ သွေးတိုလဲသက်သာစေတယ်။ ဆီးချိုလဲ သက်သာစေတယ်။ ဒီဆေးသောက်ရင် ဝမ်းထဲမှာ အဆီတွေ ပါနေမယ်။ Steatorrhea ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မပေးရဘူး။
I would like to know the menstruation period and when is the safe period to avoid pregnancy and is there any charts related to this foraclear explanation? Can you please reply just by Myanmar language?
- Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း
- Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ တွေကိုဖတ်ပါ။
ဗမာအခေါ် ထိပ်ခတ်နာလား၊ ထိပ်ကွက်နာလား၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မခေါ်တတ်ပါခင်ဗျာ။ နှာခေါင်းဟာ အမြဲတမ်း နှာစေးနေတာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ မိန်းခလေးတစ်ယောက်မှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲမှာ နှာရည်တွေ အမြဲတမ်း ရှိနေပြီး၊ တစ်ရှုးလိပ်ကိုကိုင်ကာ အမြဲတမ်း နှပ်ညှစ်နေရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုကုသရင် ပျောက်ကင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုဆေးမျိုး သုံးသင့်သလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ဆရာ။
-Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း
- Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း တွေကို ဖတတ်ပါ။
- ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာ ရှိပါက အတိုင်းမေးပါ။